पंखबहादुर शाही दैलेख । दैलेखको आठबीस नगरपालिकास्थित राकमका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । साउन १६ गते बिहीवार आर्थिक अभियान दैनिकमा ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमितता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको भत्ता दिइएको हो । नगर स्वा...
जम्बुकाँधमा सोलार लिफ्टमार्फत खानेपानी
दैलेख (अस) । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–६, जम्बुकाँधमा सोलार लिफ्टको प्रयोग गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । सोलार लिफ्टमार्फत करीब ४५ मिटर टाढाको धुपिधारा भन्ने मुहानबाट जम्बुकाँधको खुख्खा डाँडोमा खानेपानी लोडिङ गरिएको छ । खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको उक्त ठाउँमा...
जहाँ यात्रा गर्न गाडी रिजर्भ गर्नु पर्दछ........
सुकमाया थापा, साउन १५, डोल्पा । डोल्पाको एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ गाडी चढ्न रिजर्भ नगरी गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन । कम पैसा हुने र आर्थिक अवस्था कम्जोर हुने व्यक्तिले यात्रा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जिल्लाको ठुलिभेरी नगरपालिका–७ बाट ५ सम्म करीब १६ किलोमिटर सडकमा गुड्ने यातायातका साधनमा य...
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ मा ३० करोड बजेट
पंखबहादुर शाही दैलेख । कर्णाली प्रदेश सरकारले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा चालू आवका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश गरिएका योजनाअनुसार यस क्षेत्रको सडक, सिँचाइ, खानेपानी र कृषिक्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । दैलेख निर्...
कर्णालीमा इन्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना हुँदै
सुर्खेत (अस) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वको इन्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीवार सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनले कर्णाली प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव भ...
तारे होटलमा खानाको रोजाइमा फापर, उत्पादन भने बर्सेनी घट्दो
साउन १३, जुम्ला । जुम्ला जिल्लामा पुर्खाले लगाउने रैथाने बालीमध्ये एउटा होे फापर । जुम्लाका साविकका सम्पूर्ण गाविसमा धेरै उत्पादन हुने बाली फापर अहिले यहाँको स्थानीय सरकारले संरक्षणमा कुनै चासो देखाएको छैन । वर्षौंसम्म नबिग्रने विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन...
दैलेखका बस्तीहरुमा पहिरोको जोखिम उच्च, एक हप्तामा ४ परिवार विस्थापित, राति निन्द्रा लाग्न छोड्यो
साउन १२, दैलेख (अस) । पछिल्लो समय लगातारको वर्षाका कारण दैलेखका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाने क्रम बढेपछि स्थानीय त्रासमा बाँच्न बाध्य बनेका छन् । एक हप्ताको अवधिमा जिल्लामा चार घरपरिवार विस्थापित भएका छन् जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका–१ मा आएको पहिरोले ८ घरमा क्षति पु¥याएको थियो । जसमा दुई परिवा...
कर्णाली राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा ठप्प
साउन १२, जुम्ला । कर्णाली राजमार्गमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ । कालीकोट खण्डको कालेखोला नजिकै आइतवार बिहान पहिरो जाँदा सडक नै भासिएकाले छिटो खुलाउन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार ४० मिटर लामो सडकमा पहिरो गएको छ । ‘यसअघि सानातिना दर्ज...
साउन १२, जुम्ला । जुम्लाका स्याउको बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको श्रेणीकरण (ग्रेडिङ) मेशिन अलपत्र छन् । स्याउ ग्रेडिङ गरी बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको उक्त मेशिन अलपत्र परेको हो । पछिल्लो समयमा यो मेशिनमा कृषकहरुले पनि स्याउ ग्रेडिङ नगर्दा मशिनको सबै पार्...
वर्षाले तल्लो सुर्खेत डुबानमा
सुर्खेत । अविरल वर्षाले तल्लो सुर्खेत डुबानमा परेको छ । मंगलवार राति आएको भलबाढीले वीरेन्द्रनगरका ९, १०, ११, १२ र १३ नं वडाका गाउँहरू डुबानमा परेका छन् । उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रबाट बग्ने साना–साना खहरे खोलाहरूमा आएको बाढीले आसपासका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । डुबानबाट जोगिन स्थानीयवासी घर छा...